Cajiib: Macluumaadka Dajinta Shabakaynta. HTML Wareega iyo Faa'iidooyinka Waxay bixisaa Ganacsi
. Waxaan ognahay in badi bogagga waaweyn ee la qoro isticmaalka HTML. Waxay micnaheedu tahay in bog kasta oo aan arki karno waa dukumeentiga qaabaysan. Isticmaalka sawirada "HTML scraper", waxaan ka heli karnaa xogta laga helo boggaga internetka kala duwan oo u beddel qaabka la akhrin karo oo loo kala qaadi karo sida CSV iyo JSON. Waa ammaan in la sheego in sawir-qaadaha HTML uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu faa'iido leh oo la yaab leh duubista webka iyo qalabka wax soo saarka ee netka. Faa'iidooyinka asaasiga ah ayaa laga wada hadlay hoos.
1. Waqtigeennu wuxuu kaydiyaa waqtigeena
Iyada oo daabacda HTML, waxaad ka soo saari kartaa macluumaadka bogagga internetka ee fudud. Uma baahnid qalab kale oo aad ku macaamilaysid boggaga HTML maxaa yeelay waa barnaamijka oo dhan-in-mid ah si loo soo saaro xogta loo akhrisan karo iyo macne leh. Si ka duwan sida kale ee caadiga ah ee diiwaangelinta codsiyada, scrapping HTML ma qaadan doono waqti badan. Taa baddalkeeda, waxay ka soo saari doontaa macluumaadka laga helayo bogagga internetka ee casriga ah iyo kuwa horumarsan iyada oo la eegayo xaddiga kaliya. Taa bedelkeeda, adeegyadii kale ee soo kabashada waxay ka qaadan karaan toddoba ilaa toban maalmood waxayna qashin badan wakhti iyo tamar badan.
2. Xawaaraha iyo ilaalinta
Inta badan codsiyada qoondaynta webka ayaa ka gaabisnaya wicitaanada API, qaarna ma difaacaan internetka. Si ka duwan adeegyadan ka saarista macluumaadka, sawirka HTML wuxuu ku shaqeeyaa xawaaraha sare wuxuuna awoodaa inuu shaqeeyo illaa toban kun oo bog ah 20 ilaa 30 daqiiqo. Ka sokow, qalabkan wuxuu xaqiijiyaa ammaankaaga iyo asturnaantaada dhameystiran. Taas macnaheedu waa inaadan ka walwalin nabadgelyada macluumaadkaaga xoqista sababta oo ah marna lama wadaagi doono dadka isticmaala saddexaad.
3. Dayactirka weyn iyo saxnaanta
Sawir-qoruhu waa mid ka mid ah kuwan xog-isdhaafsi oo hubiya dayactirka iyo saxnaanta. Macnaheedu waa xogta la soo saaray waa qalad la'aan oo aan ku jirin ereyo marin habaabin ah. Nasiib wanaag, tiknoolajiyadda shabakadda ee buqcadda waxay u baahan tahay dayactir waxayna hubisaa natiijooyinka tayada.
4. Wuxuu kaa caawinayaa inaad ku sii jirto tartanka
Waalidkan xogta ku xiran, waxaan u baahannahay inaan feejignaanno maadaama macluumaadka lagu soo bandhigay shabakada oo isbadaleysa mid kasta oo ka. Haddii aan dooneyno in aan helno xogta saxda ah, waxaan ku qasbanaaneynaa inaan isticmaalno xoqdo HTML. Dhab ahaan, qalabkani wuxuu ku caawin karaa bilaabida hal tallaabo ka hor tartamayaashooda. Iyada oo daabacaadda HTML, waxaad ururin kartaa, qabanqaabin kartaa, xoqin kartaa oo dhoofin kartaa macluumaadka tayada-sare leh daqiiqado. Waxaa intaa dheer, adeegyadan xoqista macluumaadka waxay naga caawineysaa in aan isha ku hayno isbedelka suuqyada ee hadda jira iyo waxaan bixinaa macluumaad ku saabsan boggaga internetka ee tartamayaasha. Waxay soo saari kartaa xogta macquulka ah ee la akhrisan karo, iyada oo aan wax ka tarin tayada. Sidaa daraadeed, scraper HTML waa xulashada hore ee ururada iyo shirkadaha adduunka oo idil.
5. Ku fiiri URL-yada jaban
Mararka qaar waxaannu ku soo galnaa URL-yada jaban wali waxay doonayaan inay soo saaraan macluumaadkooda. Iyada oo daabacda HTML, waa sahlan tahay qof walba inuu soo saaro xogta laga helo boggaga internetka ee jaban, maktabadaha internetka, iyo sheyga XHMTL. Waxay leedahay siyaabo kala duwan sida Loofah iyo Sanitize waxayna ka caawisaa nadiifinta xiriirka jaban isla markiiba. Xoqitaanku wuxuu ka qaadi karaa xogta labadaba faylasha HTML iyo XML iyo waxay bixiyaan xog sax ah waqti gaaban Source .